The khadadka waxa qalabka xakameeyo waxa guriga ku yihiin mugdiga galinaya dheeraad ah sannad kasta. Haatan waxaan ku tiirsan kombiyuutarada u sheegnay in ay wax badan ka badan Processor eray keliya, ama habka ciyaaraha. Waan daawan filimada iyo television iyaga, iyo u qaadan meel kasta oo aan tago. Shirkadaha Software ayaa kor u qaadaan, soo saarka barnaamijyada in laguu ogolaado in aad si ay u abuuraan waayo aragnimo tiyaatarka guriga buuxa ku qumman your computer. Bal aynu eegno toban ka mid ah barnaamijyada DVD ciyaaryahanka ugu fiican waxaad ka heli kartaa si aad u computer.
1. PowerDVD by Cyberlink
Barnaamijkan yimaado heerka kombiyuuterada badan, oo ay ku miday sheegayaa Qisada. Waxaa la iman tan oo muuqaalada, xira in aad bogagga warbaahinta bulshada, oo waa mid aad u fudud in ay ku shaqeeyaan. Iyada oo loo marayo qaybta MoovieLive ah, waxaad la falgala taageerayaasha kale ee filimka si fudud oo dar dib u eegista kuwa kale si ay u akhriyaan. Waxaad ka ciyaari kara DVD-yada, videos Facebook, ama clips YouTube la dhibaato lahayn, iyo sidoo kale inta badan oo ka mid ah qaabab video oo caan ah. Waxaa jira muujinta a dhisay-raadinta oo kaa caawin kara in aad ku boodaan si ay qayb aad jeceshahay ee filimka. Waxaad samayn kartaa itusi on filimada gurigaaga, sidoo kale, saxo for la'aanta ah ee xasilinta image, ama nadiifinta kuwan raadkaygay audio si meesha looga saaro leexo soo jeeda.
Barnaamijkan DVD gaar ah ku siinayaa awood u leeyahay inuu u astaysto sida barnaamijyo dhowr kale kartaan. Ku dar Bookmarks, dhigay xakameynta waalidnimo, iyo ciyaari gobolada kala duwan ee videos, oo dhan ka mid barnaamijka. Waxaa ka ciyaari kara ma aha oo kaliya DVDs laakiin waxa ay sidoo kale u ciyaara ee qaabab video ugu badan, oo ay ku jiraan wmv iyo DiVX. Inta lagu guda jiro video loo maqli karo, waxaad samayn kartaa hagaajin midabka iyo Mozilla in, sida aad karto ciyaaryahanka guri. Waxaad laba daaqadaha si kontaroolada ma ka weyn tahay hogaanka filim aad u daawado. Waxa aanu ciyaari HD videos, laakiin haddii aad u baahan tahay ciyaaryahan oo wada qaadan kara, kumuunayaasha iyo qaab NTSC labada videos, tani waa mid ka mid ah.
Tani waa ciyaaryahan aan si ka dhaqso badan rasaas xawaaraha ah, laakiin waxa aanu ciyaari VCDs, SVCDs, iyo DVD-fudayd, iyo sidoo kale kale videos. Tani barnaamijka ka badan aasaasiga ah leeyahay oo dhan oo ka mid ah hawlaha muhiimka ah ee aad u baahan tahay, oo sidaas samayn kara saftay screen iyo zoom ee. Waa u fududahay in la fahmo iyo isticmaalka gacanta ku The. Tayada video waa kaliya celcelis ahaan, si kastaba ha ahaatee, oo ma xamili filimada HD. Audio lagu ciyaari karo ayaa hareereeya shan-channel. Ma ahan fanaaniinta, laakiin markii aad rabto in aad qaab ciyaareed adag taasina waa u fududahay in la isticmaalo, SuperDVD in tallaabooyinka si loo badbaadiyo maalintii.
Marka la barbardhigo SuperDVD, barnaamijkan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad leeyihiin nooc kasta oo madadaalo beddelo habka qaabeynta audio agagaarka. Xitaa in aad abuuri karaan hareereeya dhawaaqa metelay ee headphones aad. Qayb ka mid ah barnaamijka waa arrin farsamo, sidaa darteed haddii aad tahay audiophile ah oo aad u fahamto oo dhan, aad leedahay doonaa dhibaato ah ma u isticmaalaya. Users laylis yaabaa in ay dareemaan xoogaa laga badiyay, laakiinse iyagu ma ay leedahay in la sameeyo wax la goobaha. Loo maqli karo DVD waa mid aad u wanaagsan, in kastoo Iyada oo video ah ma aha sida in si qoto dheer oo qayb ka ah audio yahay. Ciyaaro filim waa u fududahay - shuban aad disc drive ka gal, oo guji play. Taasi waa!
Tani fududahay in la isticmaalo barnaamijka sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad u ciyaaro DVDs oo aan ka werwerayn oo ku saabsan gobolka. Waxaad u wareegi karaa inta u dhaxaysa gobolada inta ugu badan ee aad jeclaan lahayd. Waxaa aad u saamaxaaya in ay ku shuban filimada gal qalabka aad la qaadi karo sida iPod ah Apple ama iPhone, ama la qaadan karo Sony Playstation. Qaado screencaps ama bookmark aad movie ee kaalinta aad jeceshahay - DVD X sidaas samayn kara. Feature navigation wuxuu kuu ogol yahay inaad la qabsato goobaha aad maqal ah, oo ay ku jiraan Dolby Pro Logic II. Video loo maqli karo waa wax wanaagsan, oo waxaad dooran kartaa ka digsiga iyo iskaan ama qaababka, jidka oo dhan ilaa widescreen waraaqaha.
6. ArcSoft TotalMedia Tiyaatarka
Kaliya ciyaaryahan ma ah, TotalMedia kuu ogolaanayaa inaad upconvert aad 2D video in 3D, ama ka kor qeexidda caadiga ah si ay u qeexida sare. Waxaad sidoo kale ka ciyaari kara Blu-Ray iyo 3D filimada dhex. Waxaad bedelno audio uu ku noqon karo oo kaliya sida aad u rabto iyo ka gudbaan deegaanka oo cod. Interface waa fududahay in la isticmaalo iyo falgali, xataa qaybta u upconverting aad videos. Haddii aad u baahan tahay inay soo qaadaan subtitles, barnaamijkan waxaa kuu samayn doonaa, waana inay awoodaan inay ku siiyaan qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan filimka. Haddii aad ka welwelsan tahay waxa caruurta aad arki karto, waxaad sameyn kartaa gacanta ku waalidka barnaamijka.
Barnaamijkan wuxuu soo qaadan oo aan wax badan oo qolka on your computer, laakiin waxa ay weli ka buuxsamay muuqaalada. Waxaa ka ciyaari kara dhowr ah oo maqal ah iyo video files aan la shubeyso ah, si aad u isticmaali kartaa mashiinada ka weyn, sidoo kale. Waxaad samayn kartaa waa in aad buuxiso shaashadda ku xiran tahay waxa size of monitor aad leedahay. Waad beddeli kartaa muuqaal u eg ka interface ee ay la qabsado qarbeddada kala dildillaacinaya, oo aad bedesho mouse ama keyboard in ay furayaasha deg deg ah la isticmaalo muddada loo maqli karo. Haddii aad ku qanacsan tahay qaabka iyo eegto, aad u bilaabi karaan isla markiiba. Way fududahay in la isticmaalo.
Barnaamijkan waxa si degdeg ah, inkastoo ay soo badan oo ka mid ah qaababka. Haddii aad ku dhegto iyadoo la isticmaalayo, Corel waxay bixisaa taageero chat live, si aad dib ugu heli karaan in ay daawashada filimka aad si degdeg ah. Ay u badan tahay in aadan u baahan doontaa inaad u isticmaasho, in kastoo, si fudud ugu mahad si ay u isticmaalaan interface. Waxad abuuri kartaa playlists kuu gaar ah adiga oo isticmaalaya barnaamijkan in ay taageertaa badan oo ka mid ah qaabab video oo waaweyn. Yarey in tilaabo ee goobaha aad jeceshahay, oo iyaga bookmark inay dib markii haddana u soo noqdo. QuickClip ka shisheeya u saftay screen oo kuu ogolaanaysaa inaad clip jeex ka mid ah filimka si ay ula wadaagaan. WinDVD yimaado leh muuqaal batari keydinta la jaan qaada Windows Vista iyo 7.
Waxaa ka ciyaari kara tiro badan oo ah qaabab ka mid ah videos, oo ay ku jiraan wmv, DiVX, iyo sida dalalka magaca, AVI, iyo dib u sawiro ka ciyaari kara. Xataa waxaad ka daawan kartaa filimada qeexitaanka sare ku yaal. Waxaa si deg deg ah ugu rarataan culaysyo - had iyo jeer lagu daray ah - oo u saamaxaya kuwa isticmaala oo dunida ku baahsan ay u isticmaalaan barnaamijka, iyadoo aan loo eegin waxa afka ay ku hadlaan. Waxaa ciyaara DVDs iyo Blu-Rays, oo qoreysa DTS 5.1 awood audio. Interface waa u fududahay in ay eegaan iyo fududahay in la isticmaalo, oo lagu daray aad ku xidhan karto goobta warbaahinta bulshada jecel in ay la wadaagaan waxa aad ku soo jeeda oo kuwa raacsan ama saaxiibbo aad.
10. RioDVD Gobolka Free Player
Ciyaaryahanka Tani waxay bixisaa images tayo sare leh iyo goobaha customizable, oo idinku mar dambe ma wax laga walwalo in filimada aad ciyaari doono ee gobolka gaar ah, haddii aad tahay qof weyn ee military iyo aad halkan saldhig, waxaa, iyo meel kasta. Waxaad gudcur karo ama fududeeyo image ku xiran nalalka qolka, oo sameeya wax digsiga iyo iskaan si aadan qayb ka ah filimka aad jeceshahay seego. Yarey ee ku saabsan goobaha iyo qabtaan oo dhan ah si faahfaahsan, sidoo kale. Kontaroolada loo maqli karo waa yar tahay oo ku saabsan qaar ka mid ah barnaamijyo kale, oo waa wax fiican, sababtoo ah ma obtrusive, laakiin waxa ay sidoo kale khasaare ah sababtoo ah waxa ay noqon kartaa mid adag in la arko.
No arrinta nooca computer aad leedahay, waxaa jira xidhmo software DVD ciyaaryahan in uu noqon doono oo kaliya wax saxda ah ee waxa aad u baahan tahay. Waxaan rajaynaynaa qodobkan ayaa ka caawiyay aad hoos u soo koobto doorashadeeda si aad kaliya mid ka mid ah oo aad jeceshahay ka heli kartaa.
> Resource > Windows > Top Ten Best DVD Player Barnaamijyada PC